Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Socdaalka UK aad buu qaali u yahay
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Parks Theme • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Dalxiiska Gudaha UK wuxuu isku Qiimeeyay Suuqa
Fasaxyada gudaha ee UK iyo bixiyeyaasha hoyga ayaa si aad ah u kordhiyay qiimayaasha 2021 -ka iyada oo ay jirto baahida 'joogitaanka'.
Kororka qiimaha dalxiiska gudaha ee UK wuxuu arki karaa socdaalayaasha Ingiriiska inay u qulqulaan hawlwadeennada dibadda 2022
Qiimaha dalxiiska gudaha oo kordha ayaa ka hor istaagi kara dalxiisayaasha Ingiriiska 2022.
36% dadka deggan UK ayaa aad uga 'walaacsan' xaaladdooda dhaqaale.
Bixiyeyaasha fasaxa badan ee UK waxay u baahan yihiin inay hadda dib uga fikiraan istiraatiijiyadooda qiimeynta.
Qaar ka mid ah UK bixiyeyaasha fasaxa gudaha iyo hoyga ayaa si aad ah u kordhiyay qiimayaasha 2021 -ka iyada oo uu cirka isku shareeray baahida 'joogitaanka' taasina waxay caqabad ku noqon kartaa dalxiisayaasha Ingiriiska 2022 -ka.
Kordhinta qiimaha waxay keenaysaa fursad luntay shirkado badan oo dalxiis oo UK ah oo markii hore lahaa fursad weyn oo ay ku kordhiyaan tartanka lala galo hawlwadeennada dalxiiska dibadda. Taa bedelkeeda, sicir -dhaafka xad -dhaafka ah ayaa si wax ku ool ah uga qiimeyn kara suuqa xagaaga 2022 iyo wixii ka dambeeya, marka dadka u safraya UK ay u badan tahay inay mar kale ku biiraan dibadda.
Marka loo eego Q1 2021 UK sahanka macaamilka, 26% jawaab bixiyaasha ayaa ka jaray badeecooyin gaar ah miisaaniyaddooda sababtuna tahay masiibada. Intaas waxaa sii dheer, isla daraasaddan, 36% jawaabeyaasha UK waxay sheegeen inay 'aad u' ama 'xoogaa' ka welwelsan yihiin xaaladdooda maaliyadeed, iyagoo iftiiminaya baahida warshadaha socdaalka ee alaabada qiimaha leh.
In kasta oo ay u fududeysay warshadaha dalxiiska ee UK inay arkaan dalxiiska gudaha oo kor u kacay xagaagan, haddana waa wax laga xumaado in la arko shirkado diiradda saaraya abaalmarinnada muddada gaaban halkii ay ka eegi lahaayeen xasilloonida muddada fog ee warshadaha dalxiiska gudaha UK. Shirkaduhu waxay heleen fursad weyn si ay u abuuraan waayo -aragnimo fasax oo Ingiriis ah oo u gaar ah oo ay ku kordhiyaan qiimaha hawsha. Nasiib darro, fursadan ayaa halis u ah in laga lumiyo bixiyeyaasha joogitaanka badan sababtuna tahay habdhaqan xad-dhaaf ah oo ku wajahan baahida socdaalka.
Dalxiisayaal badan oo gudaha ah oo suurtagal ah ayaa isbarbar dhigay kharashyada loo dhan yahay Fasaxyada xirmada Yurub, oo sida caadiga ah ka mid ah duulimaadyada, hoyga, wareejinta, cuntada, iyo cabitaanka, waxaana la ogaaday in fasaxyadan ay inta badan ka raqiisan yihiin isla taariikhaha saxda ah ee fasaxyada gudaha. Waxaa intaa dheer, xeerarkii waxaa loo samaynayaa si hufan, baajinta iyo siyaasadaha lacag -celinta ayaa laga dhigay kuwo caddaalad ah, macaamiisha badanna si buuxda ayaa loo tallaalay. Sidaas darteed, daaqaddu waxay ku dhowdahay fursadda dalxiiska gudaha si ay u yeelato aragti waarta oo wanaagsan, iyo bixiyeyaasha fasaxa badan ee UK waxay u baahan yihiin inay hadda dib uga fikiraan istiraatiijiyadooda qiimeynta.
Iyada oo qaybo ka mid ah Yurub ay mar kale u furan yihiin dalxiisayaasha, socotada ayaa isbarbar dhiga qiimaha ka badan sidii hore. Ugu dambayntii, meheradaha xad-dhaafka ah ee xad-dhaafka ah ayaa qiimayn kara naftooda suuqa socdaalka, kaas oo is-burburinaya oo aan socon karin mustaqbalka fog. Shirkadaha fasaxa gudaha waxay u baahan yihiin inay fahmaan dabeecadda tartanka ee hawlwadeennada socdaalka ee dibadda iyo tartanka ba'an ee ay abuuraan. Jet2holidays iyo TUI ayaa horseed u ah bixinta fasaxyada xirmada maaddaama ay si weyn gacanta ugu hayaan silsiladdooda sahayda, iyagoo u wareejinaya kaydinta socdaalka qaab qiimayaal tartan ah.
Marka la milicsado, adeeg bixiyayaasha fasaxa gudaha UK habka gardarada ah ee lacag caddaan ah ee dalabka waxay u muuqdaan kuwo caqli-gal ah oo hawl-wadeennada dalxiiska ee dibedda u socda waxay u badan tahay inay ku soo celiyaan macaamiishii hore si ka dhakhso badan sidii la filayay.